Shily: Mananontanona ny lalàna manohitra ny fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2012 11:30 GMT
Niantso ny Kongresy hanaiky ny lalàna izay mitady sazy henjana kokoa ho an'ny mpanao fihetsiketsehana ny minisitry atitany Shiliana Rodrigo Hinzpeter, fanavaozana ny fadihevitra tamin'ny herintaona tao an-toerana ihany izany.
Nanomboka norafetina ilay lalàna taorian'ny diabe nataon'ireo mpianatra tao Santiago ny 28 Jona 2011, fihetsiketsehana izay niafara tamin'ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo Carabineros (mpitandro filaminana any Shily) sy ireo mpianatra.
Vao haingana, sisy diaben'ny mpianatra nitaky ny isian'ny fampianarana malalaka (tsy miankina). Taorian'ny fihetsiketseha-panoherana, niantso ny Kongrèsy Shiliana i Rodrigo Hinzpeter handinika sy handany ny lalàna izay nalefa tany amin'ny fiadidiana ny filoham-pirenena ny Oktobra 2011.
“Ajanony ry zalahy! Miaraka aminareo izahay. Tsy nitolo-batana ny fanantenana! aza asiana fanararaotana intsony” Saripika avy amin'ny Periodico El Ciudadano (CC BY-NC-SA 2.0)
Araka ny efa notaterina teto amin'ny Global Voices, ny ahafantarana voalohany ilay lalàna dia noho izy “miady amin'ny fibodoana” satria voalaza ao amin'ny andininy ny fisorohana ny fibodoana toerana efa mana-tompo (fanjakana na olo-tsotra). Nanomboka tamin'izay no efa nandrasana tao amin'ny Kongresy ny handaniana azy.
Tao anatin'izay fanambarany izay, nilaza i Hinzpeter [es] hoe: “Ny nifidy ilay lalàna no tena tsara, mba hanorenana lalàna tena afaka manasazy ireo olona izay manararaotra ny zony ara-drariny hiteny malalaka ka manimba zavatra tsy amin'antony”.
Nisara-kevitra momba ity lohahevitra ity ny mpisera Shiliana (Twitter).
Mpisera @La_Anemia [es], ohatra, manaiky hevitry ny lefitry ny minisitry ny atitany, Rodrigo Ubilla, izay nanery ny Kongrèsy hifidy ilay lalàna:
Tena marina ny an'i Ubilla lefitry ny minisitra…fotoana hitenenan'ny Kongresy momba ny lalànan'i Hinzpeter izao
Naneho ny fanohanany ny lalàna i Andrea Montecinos (@LaGranMantis) [es], toa an'i Javiera Cordas (JavieraCordas) [es] koa:
mahazo manao diabe am-pilaminana ny mpianatra 120.000, saingy ampy haharava ny afovoan-tanàna ny 1%n'izy ireo. Miala tsiny, fa mila ny lalànn'i Hinzpeter izahay.
Ny hafa, toa an'i Maria Carolina Inostroza (@MaCarolinaIV) [es], izay tsy miandany na amin'iza sy mino fa ilay lalàna dia valin-kafatra avy amin'ny governemanta fotsiny manoloana ireo mpitolona mahery vaika nifandona tamin'ny mpitandro ny filaminana:
Ankehitriny dia mangataka ny fankatoavana ny lalànan'ny Hinzpeter ny governemanta; famaizana noho ireo jiolahim-boto manakorontana ny diabe.
Hatramin'ny nisian'ny fihetsiketsehana tamin'ny herintaona mitaky ny fampianarana malalaka, nanambara matetika ny lohandohan'ny mpianatra fa mampiditra polisy misarontava ao anatin'ny diabe ny mpitandro filaminana, izay, indraindray,mandrisika ny herisetra . Tonga indray ity adihevitra ity ho setrin'ny lalàn'i Hinzpeter, toy ny siokan'ny Marchar x Dignidad (@morochapatetica) [es] izay mampiseho:
Mazava ankehitriny fa nampidirina hanakorontana ireo mpanao fihetsiketsehana misaron-tava omaly. Ilaina izy ireo ho an'i Ubilla mba hahafahany milaza ny fampitsaharana ny hetsika (fidinana an-dalambe) ao Alameda (Arabe lehibe indrindra ao Santiago) ka hoekentsika Haingana ny lalàn'i Hinzpeter
Maro ihany koa ireo olona tsy manaiky ilay lalàna. Ao amin'ny Twitter, nampiasa tenifototra #NoaLaLeyHinzpeter(“Tsia amin'ny lalan'i Hinzpeter) izy ireo. Olona iray atao hoe Ivonne Montero (@ivichikiturry) [es] nilaza fa:
#TsialalàniLaLeyHinzpeter manameloka alohan'ny hitrangan'ny heloka bevava ity….
Resaka iray mampiseho ny karazana lahateny sy fisarahan-kevitra eo amin'ny lalàna ny iray ifampitafatafàn'i Eggers Urusla, mpanolotra vaovao teo aloha tao amin'ny fahitalavitra MTV Chile, ao amin'ny twitter (@ursula_eggers):
‬@ursula_eggers: ‪#Tsiahoan'nyLalàn'iHinzpeter‬ Mandrava ny zo Haneho hevitra malalaka ity. Meloka alohan'ny hitrangan'ny heloka. Ratsy noho ny tamin'ny fitondrana jadona ‪#ENacional.
@eugeforestal: @ursula_eggers @Izquierda_Tuit ary ahoana momba ny zoko ho voaaro? Iza no hamaly ny fandrobana? lalànan'i Hinzpeter izao!
@ursula_eggers: @eugeforestal @izquierda_tuit Tsy miantoka fiarovana ny lalàna. Miantoka fanasaziana tafahoatra. Misoroka ny fandikan-dalàna izay mila fanavaozana lali-paka.
Nifampizarana fatratra ny fitaovana ahitana ny Fanolorana Prezi [es] nataona mpianatra lalàna Sebastian Aylwin [es] izay manazava amin'ny antsipiriany kokoa ny fonosin'ny lalàna. Araka ny hevitr'i Aylwin, maminavina 541 andro hatramin'ny 3 taona am-ponja ny lalàna ho an'ireo hita fa meloka, ankoatra ny zavatra hafa, mibodo orinasam-panjakana na an'olon-tsotra na manakorontana ny fifamovoizana na ihany koa ireo sampan'asa tena ilaina.
Rohy hafa mandehandeha be ihany koa ity horonan-tsary ao amin'ny Youtube an'i Rodrigo Fernandez tamin'ny 18 Jona 2012, izay nampihomehy ny filoha Piñera sy ny minisitra Rodrigo Hinzpeter, saingy avy eo miresaka ny endrika maro ao anatin'ny lalàna manameloka ny fanoherana an-kalamanjana.
Mampihomehy moa, araka ny notaterin'ny The Clinic [es], misy ny fandahara-potoana hanoherana ny lalàna ny 6 Jolay 2012.